&nbsp;‘राष्ट्रिय आयोजना बैङ्क सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ को शुभारम्भ कहिले गरियो ?&nbsp;&nbsp;
विक्रम संवत् २०७६ माघ २६ ।
– अबदेखि कार्यान्वयन÷लगानीयोग्य आयोजनाहरूको सङ्ग्रह यस प्रणालीमार्फत हुने।
– यसले तथ्यपरक र मापदण्डमा आधारित आयोजना पहिचान, छनोट तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने प्रणालीको विकास र अभ्यास गर्न सहयोग पु¥याउने।
– यस प्रणालीमा आयोजना कार्यान्वयनपूर्व गर्नुपर्ने अध्ययन तथा पूर्वतयारीका कार्य भएको हुनुपर्ने ।
– यसले नतिजामुखी, न्यायोचित र आयोजनाको चक्र व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको।
– नीतिगत एकरूपताको अभाव, शक्तिमा रहेका व्यक्तिको प्रभाव, आयोजनाचक्र व्यवस्थापनको अभाव, निर्धारित समय, लागत तथा तोकिएको गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले योजना बैङ्कको अवधारणा ल्याएको।
– आयोजना बैङ्क सञ्चालनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको।
– आयोगले आयोजनाको पहिचान, स्वीकृति र प्राथमिकता निर्धारणका लागि मार्गदर्शनसमेत सार्वजनिक गरको े । मार्गदर्शनअनुसार आयोजना चयन तीन चरणबाट गरिने। पहिलो चरणमा आयोजना पहिचान गरिएको अवधारणापत्र तयार गर्नुपर्ने । अवधारणापत्रलाई आयोगले अध्ययन गरपछि े दोस्रो चरणमा मूल्याङ्कन गर्ने र प्रस्तावना तयार गर्नुपर्ने । आयोगको विज्ञ समूहले परियोजना उपयुक्त लागेमा छनोट र प्राथमिकीकरणको चरणमा प्रवेश गर्ने । आयोजना आर्थिक, भौतिक तथा अन्य हिसाबले सम्भाव्य र लाभयुक्त देखिएमा मात्र त्यस्ता आयोजना बैङ्कमा समावेश गरिने।
– आयोजना बैङ्कमा समावेश योग्य हुन आयोजनाले समावेशी सामाजिक विकास, दिगो विकास लक्ष्यमा पु¥याउने योगदान, जनसहभागिताको स्तर, कार्यान्वयनको सम्भाव्यताजस्ता पक्षलाई आधार मानिएको।
पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्य भनी कसलाई चिनिन्छ ?
कुनै पनि सपना जादु गरेजस्तो यथार्थमा बद्लिदैन । यसका लागि प्रशसथ पसीना र बुदताको खाचो पर्दछ भन्ने विचारक को हन्‌?
राष्ट्रिय शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता–२०७६ को उपाधि जित्ने खेलाडी को हुनुहुन्छ ?
'भिजन फाइभ मिलियन योजना' केसँग सम्बन्धित छ ?
चिलीमा हालै (सन्‌ २०१७) सम्पन्न राष्ट्रपतीय निवाचनमा विजयी हुने उमेदवार को हन ?
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन कुन समितिमा पेस गरिन्छ ?
मौसमको सूचना तत्कालै अध्यावधिक गर्न तया मौसम सम्बन्धी भविष्यवाणीलाई थप प्रभाबकारी बनाउन नेपालमा पहिलोपटक अत्याधूतिक मौसमी राडार स्टेसन कहाँ स्थापना गरिने भएको छ ?
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई गम्भीर रूपमा लिई स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा कहिले गरको े हो ?